Home News Madaxda Soomaalida oo Xitaa Files ay qodobada ku notes gareeysaan la tegin...
Madaxda Soomaalida oo Xitaa Files ay qodobada ku notes gareeysaan la tegin Shirkii Brussels iyo Ajaaniibta oo la yaaban!!
Shirkii lagusoo gabagabeeyay Magaalada Brussels Ee dalka Biljimka ayaaa waxaa laga diiwaan geliyay ilaa iyo dhowr qodob kuwaasi oo cadeeynaayay Nidaam daro iyo fowdo cad oo Ana la dhayalsan Karin
Dhaamaan Madaxdii Soomaalida Ee ka qeeyb gashay shirkaasi ayaaana wadan wax fils ah oo lagu diiwaan geliyo amaba lagu Note-gareeyo waxyaabaha laga hadlaayay.
Ajaaniibtii joogtay goobta ayaaa waxaa ay dhamaantood wateen book notes-yo ay ku qoranaayeen waxyaabaha ay ka codsadaan madaxda Soomaalida.
Arinka yaabka leh ayaaa waxaa uu yahay raggii gudbinaayay codsigga ee dalbanaayay in dhaqaalle la siiyo ma aysan wadan qoraal iyo qodob u calaameeysnaa kuwii la tuugaayayna waxaa ay qoranayaaan hadaaaq walbo oo kasoo yeera carabkoooda, hadaba sidee lagu rumeeysan karaa rag aan isku talo iyo toowfiiqba aheeyn hadana wadan hab-nidaamsan oo ay wax u weeydiistaan.
Madaxweynaha Dalka Maxamed Cabdullahi Farmaajo, Qaar ka mid ah golaha wasiiradda xildhibaano Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada maxaa ka dhigay rag isku mid ah maxaasa looga waayay shaqsi caqligiisu siiyo in uu ugu yaraaan qaato books notes, xitaa qaarkood ayaaa telfoono ku mashquulsan
Umadda Soomaaliyeed in ay maqlaan war nuucaan ah waa wax iska caadi oo ay dhaqan ka dhigteen Madaxda hada jirta balse Ajaaniibtu barasho wanaagsan ayeey leeyihiin Hogaamiyayaasha aan isdoorin
Next articleMadaxda Dowlad Goboledyadda oo kulamo gaar ah la qaatay beesha Caalamka. Maxaa laga hadlay?
Diidmada Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada ee shirkii uu MW Farmajo Iclaamiyey waxay...